Ambongadiny Chandelier PC071 Fahazavana mihaja famoronana famolavolana spiral chandelier mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC071 Fahazavana mihaja famoronana mpamorona spiral chandelier
Fanaran-jiro mamorona haingo mihaja maivana
Loko: titanium nosarihana
Fitaovana: vy vy + Crystal
Loharano maivana: takamoa E14
Fampiharana: metatra 15-40
Refy sy loharano maivana
Izahay dia afaka manao ny haben'ny chandelier tianao kely na lehibe kokoa hifanaraka tsara amin'ny efitranonao. Vokatr'izany dia afaka manana "fianakaviana" chandelier feno amin'ny habe samihafa ianao.
Lokon'ny fitaratra sy fitaratra
Azontsika atao ny miloko ny ampahany amin'ny kristaly sy fitaratra ao amin'ny chandelier anay. Misy fomba roa fandokoana voalohany. Ny voalohany dia ny plating izay mamorona loko manome taratra tsara tarehy nefa voafetra amin'ny mety loko. Ny loko nopetahany volo mahazatra dia volondavenona, amber, koakac ary champagne. Ny safidy faharoa dia ny fandokoana, na izany aza, mamela antsika hifanaraka tsara amin'ny aloky ny loko rehetra ao amin'ny efitranonao, karipetra, fanaka, valindrihana sns.
Almond, pendalogue, drop, prisma, octagons, ball raut ary endrika kristaly hafa no azonao atao. Misy endrika kristaly marobe azontsika ampiasaina hanamboarana ny chandelier anao ary hanome azy tokana tsy manam-paharoa sy manokana.
Vita ny vy
Ny ampahany vy lehibe amin'ny chandelier dia misy ny firafitry ny rafitra, ny valindrihana valindrihana, ny rojo, ny mpihazona labozia ary koa ny ampahany mampifandray. Mitovy amin'ny kristaly, misy fomba roa lehibe hamitana ny ampahany vy, ny elektroplating ary ny fandokoana. Afaka mahatratra ny lokon'ny metaly rehetra isika fa ny loko mahazatra indrindra amin'ny vy dia misy loko volamena, chrome, mainty, varahina, nikela borosy, varahina boribory ary loko fahagola.
FOMBA FIARAHANA NY FAHAZAVANA AMIN'NY FARANY METALIKA SY GAMERA NA ACRYLIKA
Mba hitazomana ny hakanton'ny jiro mihaja anao dia amporisihinay ireto toro lalana tsotra manaraka ireto. Rehefa manadio jiro dia alao antoka fa esory aloha ny tadin'ny herinaratra. Hamarino foana fa tsy afaka miditra amin'ny fittings ny jiro na ranoka.
Fidiovana sy fikolokoloana
Ho an'ny fikojakojana ankapobeny, esory amin'ny vovoka na lamba maloto malefaka matetika ny jiro misy anao, isaky ny herinandro.
Aza mampiasa fitaovana manadio mihitsy amin'ny fanadiovana fitaratra satria mety hipoaka izany. Mampiasà vahaolana fanadiovana fitaratra sy lamba microfiber mety. Raha mpanadio simika no ampiasainao dia tandremo sao araraka amin'ny famaranana metaly manodidina azy io. Rehefa avy maina amin'ny lamba malefaka dia azonao atao ny mampiasa taratasy saro-kenatra mba hanomezana famirapiratana sy famirapiratana nampidirina ilay vera.
Teo aloha: Chandelier PC-8227 Mpirehitra zavakanto mpiorina mpiorina chandelier tsotra chandelier
Manaraka: Chandelier PC300 trano fisakafoanana Nordic fisotroana forona famoronana tsotra
Chandelier PC-8261 efitrano fandraisam-bahiny Hotel Project Li ...
Chandelier PC-8257 Art fitaratra chandelier olona ...
Chandelier 33807 Art tsotra Retro Modern French ...